Hakuna kumbove nenguva iri nani yekujoinha timu Karman®. Semunhu anotungamira wepasirese kugadzira uye muparidzi wemidziyo yakasimba yezvokurapa, isu tiri kutsvaga vakasarudzwa kukwikwidza kuti vatsigire chiono chedu nekusimudzira kukura kwedu.
Kana iwe uchikura mune inesimba, bhizimusi nharaunda, uye uri kutsvaga mukana wekujoinha timu yedu yakatanhamara yehunyanzvi, tarisa edu ebasa kutumira kana kutumira yako tangazve ku careers@karmanhealthcare.com
Isu tinopa mibairo yemakwikwi uye nerupo zvinobatsira pasuru, kusanganisira zvekurapa, mazino, zvirongwa zvekuona, kambani yakabhadhara mazororo, mazuva ezororo uye mazuva ega.
Yedu kodhi yekupfeka ndeye bhizinesi yakasarudzika uye tinochengetedza nzvimbo isina hutsi hwebasa
Mukana Wakaenzana Wemushandirwi
Karman® mukana wakaenzana mushandirwi uye wakazvipira mukugadzira nharaunda dzakasiyana. Vese vanokwanisa kunyorera vanogashira kutariswa kwebasa vasina hanya nerudzi, ruvara, chinamato, murume kana mukadzi, kuzivikanwa kwechikadzi kana kutaura, zvebonde, kwakatangira nyika, genetics, kuremara, zera, kana chinzvimbo chekare.
Karman akazvipira kushanda pamwe nekupa pekugara pekugara kune vanonyorera nehurema hwepanyama kana hwepfungwa. Vanyoreri vanonyorera chinzvimbo cheKarman nemuviri kana pfungwa kuremara avo vanoda pekugara zvine musoro kune chero chikamu chekuita chikumbiro vanogona kubata Human Resources ku hr@karmanhealthcare.com kuti vabatsirwe.
Vamiriri veVatengi Vashandi (Los Angeles, CA 91748 - USA)
Warehouse Mushandi (Los Angeles, CA 91748 - USA)
Bhizinesi Kunze Kwenharaunda Dunhu (Minneapolis, MN - USA)
Mukati meMumiriri Wekutengesa (Los Angeles, CA 91748 - USA)
Bhizinesi Kunze Kwenharaunda Dunhu (Chicago, IL - USA)
Tsvaga Injini Kugonesa (SEO) maneja (Los Angeles, CA 91748 - USA)
Junior Kushambadzira Mubatsiri (Los Angeles, CA 91748 - USA)
Bhizinesi Kunze Kwenharaunda Dunhu (Portland, Oregon - USA)
Bhizinesi Kunze Kwenharaunda Dunhu (San Antonio, Texas - USA)